चीनकाे दादागिरीले तनावमा नेपाली व्यापारी,अग्रिम पैसा तिरे पनि आएन सामान ! - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEW चीनकाे दादागिरीले तनावमा नेपाली व्यापारी,अग्रिम पैसा तिरे पनि आएन सामान !
चीनकाे दादागिरीले तनावमा नेपाली व्यापारी,अग्रिम पैसा तिरे पनि आएन सामान !
काठमाडौं: नेपालका व्यापारीहरूले चीनबाट आयात हुने सामान आइनपुगेपछि चिन्तित बनेका छन् । एउटा त चिनियाँ कम्पनीहरुले अर्डर गरेको सामान नपठाएको र पठाएको करोडौंको सामान पनि नाकामा रोकेपछि नेपाली व्यापारी तनावमा परेका हुन् । धेरै व्यापारीले चिनियाँ कम्पनीलाई अग्रिम भुक्तानी गरेर सामान अर्डर गरे पनि लामो समयसम्म नआउँदा समस्यामा परेका छन् ।
बैंकबाट ऋणदान गरेर केही पैसा कमाउने उद्देश्यले अर्डर गरे पनि सामान नै नआएपछि धेरै व्यापारी ऋणले थिचिएर केही विकल्प बाँकी नरहेको भन्दै आत्महत्याको अवस्थामा पुगेका छन् । चीनले २०२० देखि विभिन्न बहानाबाजी गरेर निरन्तर नाका बन्द गरेपछि नेपाली कम्पनीहरूलाई गम्भीर आर्थिक नोक्सान र असर निम्त्याएको छ।
सनमुन मल्टि ट्रेडिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल प्रसाद लेखकले चीनसँगको व्यापारमा ढिलाइ र अवरोधको यस्तै घटना भोगेका छन् । उनले सन् २०२१ को सेप्टेम्बरको सुरुमा चिनियाँ कम्पनी चाङ्सा वानसुम बाम्बू प्रोडक्ट्स ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडबाट डिस्पोजेबल लेटेक्स ग्लोब्सका ५ हजार बक्स आयात अर्डर गरेका थिए ।
२३ हजार ५०० अमेरिकी डलर चिनियाँ कम्पनीको बैंकमा अग्रिम रुपमा पठाएका थिए । भुक्तान भएको २० दिनभित्र ढुवानी गर्ने भनिए पनि ७ महिना पुग्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म आएको छैन । सामान नपठाएको चिनियाँ कम्पनीले पैसा पनि फिर्ता गर्न मानेको छैन । फिर्ताको माग गर्दा चिनियाँ कम्पनीले केही कानुनी समस्याका कारण कम्पनी बन्द गरी बैंक खाता सरकारबाट जफत गरिएको जवाफ दिने गरेको छ ।
चिनियाँको यस्तै रवैयाका कारण गत वर्ष कैयौं नेपाली व्यवसाय धरासायी बन्न पुगेका थिए । यस्तै विद्युतीय स्कुटर बिक्री गर्ने कम्पनी आस्था अटोमोबाइलले २०२१ अप्रिलमा चीनबाट ४०० वटा ब्याट्री अर्डर गरेको थियो । कम्पनीका सञ्चालक सुरेन्द्र मानन्धरले बताएअनुसार ब्याट्री केरुङ र तातोपानी नाकासम्म पुगे पनि नेपाल पुगेन । सीमा नाकाहरूमा ब्याट्रीका धेरै टुक्राहरू हराए । अब व्यवसायहरूले पैसा गुमाउने डरले चीनबाट चीजहरू अर्डर गर्दा सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यस्तै अर्को घटनामा घरायसीका लागि सजावटका सामान आयात गर्ने व्यापारी अनुप श्रेष्ठले चिनियाँ आपूर्तिकर्ताबाट सामानको ग्यारेन्टी वितरण नभएको बताए । चीनबाट नेपाल ल्याउन ढिलाइ हुनुका धेरै कारण छन् । हालको चिनियाँ नीतिअनुसार चीनले दिनमा आठदेखि दश ट्रकसम्म मात्रै नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने गरेको छ, जसको प्रमुख कारण ढिलाइ ढिलो हुनु हो ।
नेपाल–चीन सीमा १ हजार ४१४ किलोमिटर लामो भए पनि दुई वटा मात्र सञ्चालन (तातोपानी र रसुवागढी नाका)मा छन् । लामो लाइन भएकाले छिटो ढुवानीका लागि पर्याप्त छैनन् । चिनियाँहरूले आयातका लागि कन्टेनरहरूको संख्या बढाउने आश्वासन दिए पनि तिनीहरू योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएका छन् ।
नेपाल–चीन सीमामा चीनले ट्रक र कन्टेनर रोकेपछि नेपालका व्यापारीहरु चिन्तित बनेका छन् । चीनले नेपाल पठाउने ढिलाइ र असफलताले पनि चिनियाँ अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा उकास्न नसकेको संकेत गर्छ । वर्तमान अवस्थाहरूले चिनियाँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि चिनियाँ एसएमईहरूको अवस्था राम्रो छैन भन्ने पनि हो । यो मुद्दाले अर्थतन्त्र र विशेषगरी चिनियाँ कम्पनीहरूको बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्थालाई पनि संकेत गर्छ ।
यसअघि २०२१ जनवरी १९ मा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नेपालसँगको व्यापारमा चीनले निष्पक्ष नभएको आरोप लगाएका थिए । उनले नेपाल–चीन व्यापारलाई असर गर्ने भूगोलबाहेक अन्य कारक रहेको समेत बताए । उनले भनेका थिए, ‘चीन धेरै गैरजिम्मेवार छ जसले व्यापारलाई कठिन बनाइरहेको छ । हामीले सोच्न र छिटो कार्य गर्न आवश्यक छ किनकि यदि चीजहरू यसरी नै चलिरह्यो भने, यो एक विपत्ति हुनेछ ।’
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा चीनसँग छ । चीनले झण्डै आठ हजार नेपाली वस्तुमा भन्सार फ्री कोटा फ्रि बजार पहुँचको प्रस्ताव गरे पनि तुलनात्मक लाभ हुने योजनामा चीनले नेपालको परम्परागत उत्पादनलाई अनुमति नदिएको महसुस भइरहेको छ ।